Khoros na-enyere nnukwu ụdị aka ịhazi, chịa, bipụta, ma tụọ mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta na-ebute nsonaazụ azụmahịa. Kedu otu Khoros 'Social Media Platform si enyere Enterlọ ọrụ aka ịrụ ọrụ - Mee ka otu gị niile, ọwa, yana ọdịnaya dị n'otu usoro ikpo okwu dị mfe. Jikwaa mkpọsa mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi na mkparịta ụka oge na otu dashboard na arụmọrụ na visibiliti dị ukwuu. Bulie ọdịnaya gị - Na-emekọrịta, atụmatụ, na jikwaa mgbasa ozi ọha na eze ezubere iche nke na-akpali njikọ na ndị na-ege gị ntị. Ejikọta echiche nke arụmọrụ